Warar | Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha | Page 105
Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha
Maqal iyo Muuqaalo
Sacuudiga oo oggolaaday inay Haweenka Soomaalida ka xoogsan karaan Sacuudiga.
Wasaaradda Shaqada ee Dowladda Sacuudiga ayaa si rasmi ah u shaacisay in Haweenka u dhashay dalka Somalia ee khibradda u leh Hawlaha Khadaamooyinka loo oggolaaday inay Xirfadooda uga shaqeysan karaan Guryaha Qoysaska iyo Xafiisyadda Sacuudiga. Wargeyska Alriyadh ee lagu qoro Luqadda Carabiga kana soo baxa Caasimadda dalkaasi ee Riyadh ayaa qoray inay Dowladda Sacuudiga go’aankaasi u qaadatay, kadib, ...
Ambassador Ali Amerika oo iska difaacay Eedeymihii Guddiga QM ee Xayiraadda Hubka ee Somalia.
Danjirihii Dowladda Somalia u joogay dalka Kenya, Ambassador Mohamed Ali Amerika ayaa sheegay inuu Kharajka u soo xerooday Safaaradda u adeegsaday inuu ku taageero dadka Soomaalida ee ku dhibaataysan gudaha Kenya. Qoraal E-mail oo uu Danjire Amerika u diray Guddiga QM ee Kormeerka Xayiraadda saaran dalalka Somalia iyo Eritrea (The Monitoring Group on Somalia), ayaa waxa uu ku faahfaahiyey qaabka ...
Golaha Ammaanka ee QM oo u codeeyey in Somalia lagu sii hayo Xayiradda Hubka
14-xubnood oo ka mid ah 15-ka xubnood ee Golaha Ammaanka ee QM ayaa waxay xalay u codeeyeen in Somalia iyo Eritrea lagu sii hayo Cunaqabatayntii Hubka ee ay Golaha Ammaanka ku soo rogeen sannadkii 2009-kii. Danjuraha dowladda Venezuela u jooga Golaha Ammaanka ee QM ayaan soo xaadirin xilligii codka loo qaaday Xayiraadaasi, iyadoo uu Danjiraha walaac ka muujiyey Erayadda lagu ...
Canshuurihii laga qaadi jirey Ganacsatadda Suuqyadda oo la mamnuucay.
Iyadoo la tixraacayo wareegtada sumadeedu tahay MOF/OM/0060915 ee ka soo baxday Xafiiska Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane, Maxamed Aden Ibraahim Farkeeti, ayaa si toos ah loo joojiyay canshuurtii 20-ka doolar ahayd ee bil kasta laga qaadi jiray ganacsatada suuqyada wax ku iibisa. Wareegtada ayaa lagu sheegay iyadoo laga duulayo xaalada amaan xumo ee dalka ka jirtay mudada dheer, taas oo sababtay ...
Boliska Kenya oo sheegay inay qabteen rag u dhashay Tanzania oo lala xiriirinayo Alshabaab
Boliska Gobalka Laamo ee Kenya ayaa sheegay in labo nin oo Tanzanian ah ku qabteen Hawlgalladda Milliteri ee ka socda Kaymaha Forest. Mid ka mid ah Eedeysanayaasha oo lagu magacaabo Mascuud Bashiir Xamisi ayaa la sheegay in lagu qabtay Kontoroolka Deegaanka Hola. Waana markii labaad ee Eedeysanahaasi lagu qabtay Kenya, iyadoo bishi iJanaayo ee sannadkan loo masaafuriyey Tanzania. Eedeysanaha labaad ...
© Copyright 2015 Dadweyne All Rights Reserved